WONDERFUL UNIVERSE: November 2008
မိုး နဲ့ မြေ ကို ချစ်တဲ့သူ
(လမသာတဲ့ည အကြောင်း ရေးမိပေမဲ့ ရှာတွေ့လို့ ရတဲ့ ပုံက လသာတဲ့ည ဖြစ်နေတာကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ ဒီပုံလေးကို ညီလေးဂစ်တာရဲ့ Picasa Website ထဲက ယူထားတာပါ) ထိုနေ့က လမသာပါ။ လကွယ်ည ဆိုပေမဲ့ ကြယ်ရောင်တွေ အောက်မှာ မြို့ကလေးက ငြိမ်သက်စွာ အိပ်မောကျစ ပြုလို့ နေပြီ။ ချမ်းသာကြီး ဘုရားကုန်းက ခုံတန်းလေးပေါ် ထိုင်ရင်း မြို့ကလေးကို အပေါ်စီးက စီးမိုးကြည့်ရတဲ့ အရသာကို ကျွန်တော် ကြိုက်သည်။ အခုလို ညချမ်းမှာ အေးစိမ့်စိမ့့်် လေနုအေးတွေ ကျွန်တော့် မျက်နှာကို ဖြတ်တိုက် နေလျှင်တော့ စိတ်တွေ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး သွားသလို ခံစားရသည်။ လေတွေကို တစ်ဝကြီး ရှူသွင်းရင်း ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တိုင်း အငွေ့လေးတွေအဖြစ် လွင့်ပျံ့သွားကြတာကို ကျွန်တော် သဘောကျသည်။ကြည့်စမ်းပါဦး။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ မြို့ကလေးက ဘယ်လောက် ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲ။ ပူပန်စရာ သောကတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ ထမ်းပိုးထားရရ၊ ဒီနေရာလေးမှာ အခုလို တစ်ယောက်ထဲ ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ် ရှိနေရလျှင်တော့ ဒုက္ခတွေအားလုံး ပျောက်ဆုံးကာ ငြိမ်းချမ်းလို့ နေမြဲ။ ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးကို အမြဲ လာဖြစ်နေတာထင်ရဲ့။ချမ်းသာကြီး ဘုရားပေါ်က ဆင်းလာတော့ အိမ်ကို ပြန်ချင်စိတ်က မရှိ။ မြို့လယ်အင်းဘေး သွားထိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ မေမေ စိတ်ပူနေလဲ မတတ်နိုင်။ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုနဲ့ ခွဲပြီး ကြာကြာ ကျွန်တော် မနေနိုင်တာ ဖေနဲ့မေ အသိဆုံးပါ။ ကန်ရေပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေအေးအေးက ကျွန်တော့် အတွေးစတွေကို သိမ်းယူသွားတယ်။ ကန်စပ်က မြက်ခင်းပေါ် ထိုင်ချလိုက်ရင်း ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်ကို ငေးနေလိုက်တယ်။ လေ အဝှေ့မှာ လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေ ထထသွားတာ မြင်ရတော့ အင်း၊ ဒီလောက် နက်ရှိုင်း တည်ငြိမ်နေတဲ့ ရေပြင်တောင် တစ်ခါတစ်ရံ လှုပ်ရှားရသေးတာ၊ ငါကကော ဘာမို့လို့လဲ။ လောကကြီးကို မကျေမနပ် ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ထဲက လေးလံလွန်းလှတဲ့ သောကတစ်ချို့ ကန်ရေပြင်ထဲ လွင့်ကျ နစ်မြှုပ် သွားခဲ့တယ်။အချစ်တစ်ခုနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဘဝတွေက တစ်ခါတစ်ခါမှာ ဘာကြောင့်များ ခါးသီးဖွယ် ကောင်းနေ ရတာ ပါလိမ့်။ ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ အချစ်တွေကပဲ မခိုင်မြဲ ခဲ့လို့လား၊ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အတ္တတွေကိုပဲ ဦးစား ပေးနေ ခဲ့ကြ လို့လား။ အသွင်မတူ၊ အိမ်တူမဖြစ် ဆိုသလို သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တာတွေ သိပ်ပြီး များနေ ခဲ့လို့လား။ အဆင်မပြေတဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတွေကပဲ ဒီအချစ်တွေ လျော့ပါးသွားအောင် ဝါးမျို သွားခဲ့ ကြသလား။ တကယ်တမ်းတော့ နှစ်ကိုယ်တူ တဲအိုပျက်မှာ ထမင်းရည်ပူ အတူသောက်နေရပေမဲ့ မပြယ်တဲ့ အချစ်တွေ ရှိနေကြဦးမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် ယုံကြည် ချင်ပါသည်။ အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးသားက ဘယ်လောက် ချစ်မြတ်နိုးစွာ ပေးဆပ်နိုင်မလဲ၊ နားလည်မှုတွေ ပေး နိုင်မလဲ၊ ခွင့်လွှတ် တတ်မလဲ... ဒါတွေ လိုအပ်နေတာပဲ ထင်ရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်က ကျွန်တော် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကောင်းကင်နဲ့ မြေပြင်ကို နီးစပ် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်အောင် ကြားမှာ အမြဲ ရပ်တည် ပေးနေဖို့ လိုအပ်မှန်း သိနေခဲ့ပြီပဲ..။ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကို မားမားမတ်မတ် ရပ် လိုက်ပြီး လက်တွေကို အမြင့်ဆုံး ရောက်အောင် ဆန့်ထုတ်ရင်း မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ထားလိုက်တယ်။ အသက်ကို ပြင်းပြင်း ရှိုက်သွင်းလိုက်ပြီး လောကကြီးကြားအောင် စိတ် ထဲကနေ အကျယ်ကြီး အော်လိုက်တယ်။ ဖေနဲ့ မေကို ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ်။ ဖေက ကျွန်တော့ဘ၀အတွက် အဆုံးအစမရှိ လွတ်လပ်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကောင်းကင်ကြီး ဖြစ်ပြီး မေကတော့ ကျွန်တော် ရပ်တည်မှီရာ ရေသောက်မြစ် ဖြစ်တဲ့ ဟောဒီ မြေပြင်ကြီးဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်စ်ိတ်တွေ သက်သာရာ ရသွားပြီ။ အိမ်ကို ပြန်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေကို ပြင်လိုက်တယ်။ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေက ပို လင်းလက်လာသလို မြေပြင်က ပန်းတွေကလဲ ပို မွှေးပျံ့လာပြီး ကျွန်တော့် အိမ်အပြန်လမ်းကို ဆီးကြို လို့။မိုးနဲ့မြေကို ချစ်တဲ့သူကျွန်တော့်မှာချစ်သူ နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်ကကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုမတ်မတ်ရပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကျောကိုခင်းပြီးအနင်းခံခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ ကြင်နာမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ....ရှင်သန်ကြီးထွားလာပြီးလူလားမြောက်ခဲ့ရတာပေါ့။နောက် တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုအာကာသထိ လွင့်မျောမသွားအောင်သူ့ဝတ်ရုံပြာပြာနဲ့ပွေ့ဖက်ပေးခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအသက်ရှူမှုမှန်စွာအာရုံတွေ ရင့်ကျက်ခဲ့ရတာပေါ့။နှစ်ယောက်စလုံးဟာအကြင်နာတွေ၊ မေတ္တာတွေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှင်သန်မှုဘဝကိုဆောက်တည်ပေးနေကြတယ်။တကယ်လို့များ....တစ်ယောက်ယောက်ဟာသူတို့နှစ်ဦးထဲကဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်သလဲမေးခဲ့ရင်အမှန်အတိုင်းဖြေပါ့မယ်။ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုမားမားရပ်ဆန့်တန်းနီးစပ်ကျွမ်းဝင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ပဲရပ်တန့်နေလိုက်ပါ့မယ်..ကဲ....ဘယ်သူအပြစ်ပြောမလဲ။28.10.1997 က ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာမဟုတ်၊ စာမဟုတ်..လေးကို ပြန်တွေ့လို့ ဒီမှာ သိမ်းထားလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဖေနဲ့မေ သိပ်ပြီး အဆင် မပြေကြတော့ ကျွန်တော် စိတ်လေလေနဲ့ ညဘက်တွေ လျှောက်သွားရင်း အင်းဘေးမှာ ထိုင်ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာလေးပါ။ရေးသားသူ - မိုးကုတ်သား
The Power of Color (အရောင်တွေရဲ့ စွမ်းအား)
အရောင်တွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ သေချာ မလေ့လာဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အရောင်တွေက ပေးတဲ့ စိတ်အာရုံ ခံစားမှုတွေကို တော်တော် သိချင်ခဲ့တာ။ အခုတလော စာတွေ လိုက်ပီး ဖတ်ဖြစ်ရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စား မိတာလေးတွေ တွေ့ရင် မျှဝေပေးချင်နေမိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဖတ်မိတာထဲက တစ်ချို့ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။"Colors, like features, follow the changes of the emotions." --Pablo PicassoREDအနီရောင်က စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပေးနိုင်ဆုံး၊ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး၊ ပြီးတော့ တခြားအရောင်တွေထက် ပိုပြီး ထင်ရှားမှု အရှိဆုံး အရောင် ဖြစ်တယ်။ စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွမှုကို အပေးနိုင်ဆုံး အရောင် ဖြစ်သလို အာရုံစိုက်မှုကို အများဆုံး ရရှိတဲ့ အရောင်လဲ ဖြစ်တယ်။ စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ် ကောင်းတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေမှာ သုံးရင် ပိုပြီး ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့မှုကို ပေးသလို အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေမှာ သုံးတဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ pituitary နဲ့ adrenal ဂလင်းတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး adrenaline ဆိုတဲ့ စိတ်ဖိအားပေးမှုတစ်မျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ သွေးဖိအားကို မြင့်တက်စေပြီး အသက်ရှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။ အာသာဆန္ဒ နဲ့ စားချင်စိတ် ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အနံ့ခံအာရုံကို ပိုကောင်းစေတယ်တဲ့။ အင်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အနီရောင် များများ သုံးရင် ပို ရောင်းကောင်းမယ် ထင်တယ်ဗျ၊ နော။YELLOWအဝါရောင် က လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးဏှောက်ထဲမှာ ပထမဦးဆုံးသော ကွဲပြားထင်ရှား စေတဲ့ အရောင် ဖြစ်တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ် ပူပန်မှု၊ ဂရုစိုက် သတိပြုခြင်း၊ အစရှိတဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး အကောင်း ဘက်မှမြင်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ဟန်ချက်ထိန်းညှိခြင်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်း တွေကို လှုံ့ဆော် ပေးပါ တယ်။ ရွှေဝါရောင် ဟာ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ဆောင်ယူလာတယ်လို့ လူ့စိတ်အာရုံကို ယုံကြည်စေတယ်။ အဝါရောင်ဟာ စိတ်အာရုံကို နှိုးဆွ ပေးပြီး မှတ်ဉာဏ်ကို ကောင်းစေတယ်။ အသိဉာဏ် ပွင့်လင်း စေပြီး ဆက်သွယ်မှုအာရုံကို ဖြတ်လတ်စေတယ်။ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေပြီး အနုပညာ ဈာန်ဝင်စားမှု အာရုံကို ပိုပြီး ကွန့်မြူးစေတဲ့အတွက် စာသင်ခန်းတွေမှာ သုံးဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ORANGEလိမ္မော်ရောင်က အဝါနဲ့အနီ နှစ်ရောင်ရဲ့ ကြားက အရောင်ဖြစ်တယ်။ လိမ္မော်ရောင်ကို ချစ်သူ၊ မုန်းသူ တွေကြား အချေအတင် ဖြစ်မှုက တခြား အရောင်တွေထက် များပြားလှပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အကောင်း၊ အဆိုး ခံစားမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ် နေပါတယ်။ တောက်ပြောင်တဲ့ လိမ္မော်ရောင်ဟာ နွေးထွေးမှု နဲ့ တက်ကြွမှု စွမ်းအားကို ဖြန့်ကျက်ပေးပါတယ်။ လိမ္မော်ဘက် လုတဲ့ မြေကြီးရောင်၊ မက်မွန်ရောင်၊ သံချေးရောင် တွေဟာ လူ အတော် များများ နှစ်သက်ကြတဲ့ အရောင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွခြင်း၊ ပိုမို ခံတွင်း မြိန်စေခြင်း စတဲ့ အာရုံတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ တက်ကြွ ပါဝင်လိုစိတ်ကို အားပေးပါတယ်။ လေ့လာ သင်ယူမှု အာရုံတွေ အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး တွေထဲက အရောင်တစ်ရောင် ဖြစ်ပါတယ်။BLUE အပြာရောင်က စိတ်နှလုံးကို အများဆုံး အေးငြိမ်းစေတဲ့ အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေကို ဖြေလျှော့ ပေးပြီး ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို တိုးပွားစေတယ်။ အပြာရောင်ကို မြင်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဦးဏှောက်တွေက neurotransmitters လို့ ခေါ်တဲ့ အာရုံ လှုပ်ရှားမှု ဆယ့်တစ်မျိုးကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကို သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေတဲ့အပြင် အပူချိန်၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အာသာဆန္ဒတွေ ကိုလဲ လျှော့ချပေးပါတယ်။ အပြာရောင်ဟာ မှီခိုအားထားမှု၊ စိတ်ချယုံကြည်မှု နဲ့ တာဝန်ယူမှုတွေကို ခံစား ရရှိစေပါတယ်။ ကောင်းကင်နဲ့ ပင်လယ်ပြင်တို့ရဲ့ အပြာရောင်ကြောင့် လူတွေရဲ့ အပြာရောင်အပေါ် သဘောထားမှုက တည်ငြိမ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အပြာရောင်တိုင်းကတော့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကို ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လျှပ်စစ်မီး အပြာရောင်၊ အလွန်တောက်ပတဲ့ အပြာရောင် တွေက တက်ကြွမှု နဲ့ တခမ်းတနားရှိမှုကို ခံစားစေတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြာရောင်တွေက စိတ်ကို ရွှင်ပျလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြာရောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေ၊ အပြာရောင်တွေကို လိုအပ်တာထက် ပိုသုံးမိရင်တော့ အေးစက်မှုနဲ့ လစ်လျှူရှုမှု တွေကို ခံစားရစေပါတယ်။ အပြာရောင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းအေးမြပြီး စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေတဲ့အတွက် အားပေးကူညီ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ GREEN အစိမ်းရောင်က လူတွေရဲ့ မျက်လုံးက မြင်နိုင်တဲ့ ရောင်စဉ် တွေရဲ့ နေရာ တော်တော်များများကို ယူထား ပါတယ်။ အပြာရောင် ပီးရင် ဒုတိယ လူကြိုက် အများဆုံး အရောင်ပါ။ စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို ပေးတဲ့ အရောင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထဲက histamine လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတစ်မျိုးရဲ့ အင်အားကို မြင့်တက်စေပြီး အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ အနာရောဂါပြီးတဲ့ ကုသမှုတွေမှာ အထောက်အကူပေးတယ်။ အစိမ်းရောင်ဟာ အေးမြမှုနဲ့ နွေးထွေးမှုကို သဘာဝအလျှောက် တွဲစပ် ထိန်းညှိ ပေးထားပြီး စိတ်အာရုံကိုအေးငြိမ်း လန်းဆတ်စေတယ်။ အစိမ်းရောင်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝ သတ္တလောက နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အရောင်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်က စိတ်အေးချမ်းမှု ပေးရုံသာမက ကိုယ်ခန္ဓာကိုရော စိတ်အာရုံကိုပါ သက်တောင့်သတ်သာ အနားရစေပါတယ်။ ဝေဒနာကို သက်သာစေပြီး စိတ်ကျခြင်း၊ စိတ်အာရုံ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်သောကများ ကို သက်သာရာရစေတယ်။ သဟဇာတ ညီညွတ်မှု၊ စိတ်ခွန်အားသစ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှု အစရှိတဲ့ စိတ်အာရုံတွေကို ခံစားရစေပါတယ်။ သဘာဝလောကကြီးရဲ့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ စိမ့်ဝင် ပျံ့နှံ့ပြီး တရင်းတနှီး မြင်နေရတတ်တဲ့ သစ်တောစိမ်းရောင်အစ သံပရာစိမ်းရောင် အဆုံး အစိမ်းရောင်စဉ်တွေဟာ ဟာ စိတ်အာရုံကိုအေးငြိမ်း လန်းဆတ် နေစေတဲ့အတွက် အိမ်အတွင်းခန်း အပြင်အဆင်တွေရဲ့ နောက်ခံအရောင် (backdrop) အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ သင့်လျော်ပါတယ်။BROWNအညိုရောင်က ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အရောင်ဖြစ်ပြီး သဘာဝနဲ့ ဇီဝအခြေခံ အရာဝတ္ထု တော်တော် များများမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အညိုရောင်ဟာ တည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ချယုံကြည်မှု၊ ခင်မင်ဖော်ရွေမှု တို့ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ လုံခြုံစိတ် နဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စိတ်တွေကို ခံစားရစေပြီး ပင်ပန်း နွမ်းနယ်စိတ်ကို လျော့ကျစေတယ်။ ကမ္ဘာမြေနဲ့ သွယ်ဆက်ပေးပြီး နေထားတကျ ဖြစ်စေသလို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး တည်ငြိမ်စေပါတယ်။WHITEအဖြူရောင်က သန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ ကြားနေအရောင် ဖြစ်တယ်။ စိတ်အာရုံကို ဖြူစင်ကြည်လင်စေ သလို စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ အနှောက်အယှက် ဖြစ်မှုတွေကို သက်သာရာ ရစေတယ်။ အတွေးအာရုံ နဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို သန့်စင်အောင် နှိုးဆွပေးပြီး လန်းဆတ်တဲ့ စိတ်တွေကို အစပျိုးပေးပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ဂျူတီကုတ် နဲ့ ရိုးရာ သတို့သမီးဝတ်စုံတွေက အဖြူရောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အိမ် ခြံစည်းရိုးကို အဖြူရောင် သုတ်ထားတဲ့အခါ လုံခြုံပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အိမ်ကလေး အဖြစ် ခံစားရစေပါတယ်။GRAYမီးခိုးရောင်က အချိန် အတိုင်းအဆမဲ့တယ်၊ လက်တွေ့ကျတယ်၊ ခိုင်ခံ့တယ်။ အချိန်ကာလများစွာ လူတွေ နှစ်သက်ကြတဲ့ အရောင် ဖြစ်ပြီး ဘယ်အရောင်နဲ့မဆို တွဲစပ်လို့ လိုက်ဖက်တယ်။ မီးခိုးရောင်ကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက်ကြ ဝတ်ဆင်ကြပေမဲ့ အကြိုက်ဆုံး အရောင်လို့တော့ မသတ်မှတ်ချင်ကြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ဆုံးရှုံးမှု၊ တွေဝေမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေနဲ့ ဆကိနွယ်နေလို့ပါ။ မီးခိုးရောင်ဟာ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်၊ ဂနာမငြိမ်စိတ် တွေကို ဖြစ်စေပြီး မျှော်တလင့်လင့် ခံစားရမှုတွေကိုလဲ ပေးပါတယ်။BLACKပြင်းပြတဲ့ စိတ်အာရုံ ခံစားမှုတွေကို ကျော်လွှား ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ တွန်းအားကို ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အနက်ရောင်က အာဏာနဲ့ စွမ်းအားကို ဖော်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။ မပေါ်လွင်၊ မထင်ရှား တဲ့ စိတ်ကို ဖြစ်စေပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် အေးအေးသက်သာ ရှိစေတယ်။ နက်နဲသိမ်မွေ့ ဆန်းကြယ်မှုတွေကို ခံစားရစေပြီး ဖြစ်နိုင်ချေ၊ အလားအလာရှိမှုကို မျှော်လင့်စေပါတယ်။ ဂန္ထ၀င်ဆန်တဲ့ ဒီ အနက်ရောင်ကို အဝတ်အစားတွေမှာ အသုံးပြုကြတာ များတယ်။ သူက ဝတ်ဆင်သူကို ပိုမို သွယ်လျ သွားစေသလို ပိုပြီးတော့လဲ ခေတ်မီစေပါတယ်။PURPLEခရမ်းရောင် မှာ အနီရောင်ရဲ့ ဟန်ချက် ထိန်းညှိမှုနဲ့ အပြာရောင်ရဲ့ အေးချမ်း တည်ငြိမ်မှုတို့ ပါဝင် ဖွဲ့စည်း ထားတယ်။ အဲ့ဒီ အရောင် နှစ်ရောင်ရဲ့ ပါဝင်မှု အနဲ၊ အများပေါ် မူတည်ပြီး တခါတရံမှာ မကျေနပ်မှု၊ စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်မှုတွေကို ခံစားရစေတယ်။ ဂန္ဓရီ ဆန်တဲ့ အာရုံ၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှု တွေကိုလဲ ခံစားရစေပါတယ်။ အနုပညာ ဖနိတီးမှု စွမ်းအားကောင်းတဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ လူထူးလူဆန်းတွေနဲ့ မြီးကောင်ပေါက် မိန်းခလေးတွေ အများဆုံး ကြိုက်တတ်ကြတဲ့ အရောင်ပါ။ ခရမ်းရောင်က စိတ်ခွန်အားကို မြင့်တက်စေတယ်။ နောက်ပြီး စိတ်အာရုံ ခံစားမှုတွေကိုလဲ တည်ငြိမ် စုစည်းစေတယ်။ စိတ်ဝိဥာဉ်ပိုင်း ဆိုင်ရာဘက်ကို အထောက်အကူ ပေးသလို အနုပညာ ဖန်တီးမှု စိတ်ကူးတွေကိုလဲ ပိုပြီး နိုးကြားစေပါတယ်။ Dark color လို့ ခေါ်တဲ့ အမှောင်ဘက် သွားတဲ့ အရောင်တွေက စိတ် ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ကျစေပြီး အေးချမ်းမှုကို ခံစားရစေပါတယ်။Bright color လို့ ခေါ်တဲ့ တောက်ပတဲ့ အရောင်တွေကတော့ စိတ်တက်ကြွ စေပြီး တီထွင်ဖန်တီးမှု အာရုံတွေကို နှိုးဆွ ပေးပါတယ်။ စိတ်အာရုံကို လှုပ်ရှားစေပြီး ရန်လိုစိတ် တွေကိုလဲ တခါတရံ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ စုဆောင်းတင်ပြသူ - မိုးကုတ်သား
Short Stories . 01
ကြီးမားတဲ့ နောင်တတရားလူတစ်ယောက်က သူနှစ်သုံးဆယ်လုံးလုံး သယ်ဆောင်ထားရတဲ့ နောင်တ တရားကို ဘုရားသခင်က ဘယ်လို ခွင့်လွှတ်နိုင်မလဲ သိချင်တဲ့အတွက် ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကို သွားမေးပါတယ်။“မောင်မင်းရဲ့ ပြစ်မှုက ဘာများပါလိမ့်”“ကျွန်တော်က ဈေးထဲမှာ ဈေးရောင်းတဲ့ သူပါ။ တစ်ညတော့ ဈေးမီးလောင်တယ်ကြားလို့ အပြေးအလွှား သွားကြည့်ပါတယ်။ ဈေးကိုရောက်တော့ တစ်ခြား ဈေးဆိုင်တွေ အကုန်လုံး ပြာကျနေပြီး ကျွန်တော့်ဆိုင်တစ်ခုထဲ မီးမလောင်ပဲ ကျန်ရစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့ သတိ လက်လွတ်ပီး ဘုရားသခင်ကို ထိုင် ရှိခိုးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းပဲ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော် သတိဝင်လာခဲ့ပြီး ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ် မြင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် အိမ်နီးနားချင်း ဈေးသည်တွေအတွက် ပူဆွေးဝမ်းနည်း ရမဲ့အစား ကိုယ့်ဆိုင်ကလေး မီးထဲပါ မသွားတာကိုပဲ တဒင်္ဂံဝမ်းသာ နေမိတဲ့အတွက် အင်မတန်မှ ရှက်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အမှားအတွက် အနှစ် သုံးဆယ်လုံးလုံး ကျွန်တော် နောင်တ ရနေမိတာပါ ခင်ဗျာ ”စွန့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးပညာရှိ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးဟာ တောင်ကြားလမ်းအတိုင်း ခရီးသွားရင်း မမျှော်လင့်ပဲ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကျောက်တစ်ပွင့်ကို စမ်းချောင်းလေးထဲကနေ ကောက်ရခဲ့တယ်။ ခရီးသွားနေရင်း လမ်းတစ်နေရာမှာ အင်မတန် ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေတဲ့ ခရီးသွား တစ်ဦး ကို တွေ့တယ်။ သူမရဲ့ အိတ်ထဲက ပါလာတဲ့ စားစရာ တစ်ချို့ကို ထုတ်ကျွေးတော့ အဲ့ဒီ ခရီးသွားက အမျိုးသမီး အိတ်ထဲက ကျောက်ကို မြင်သွားတယ်။ သူက အမျိုးသမီးဆီက အဲ့ဒီကျောက်ကို တောင်းတော့ အမျိုးသမီးက ဆိုင်းငံ့မနေပဲ ချက်ချင်းပဲ ပေးလိုက်ပါတယ်။ခရီးသွားလဲ သူ့ရဲ့ ကံကောင်းမှုကို ကျေနပ်ပြီး ခရီးဆက်ခဲ့တာပေါ့။ အဲ့ဒီ ကျောက်က သူ့တစ်ဘဝလုံး စားမကုန်အောင် တန်ဖိုးရှိမှန်း သူ သိတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ရက် အနည်းငယ် အကြာမှာပဲ သူက ပညာရှိ အမျိုးသမီးကို လိုက်ရှာပြီး ကျောက်ကို ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။“ကျွန်တော် စဉ်းစားနေခဲ့တယ်” သူကပြောတယ်။“ဒီ ကျောက်က ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ပြန်ပေးခဲ့သလဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျားဆီမှာ ဒီ့ထက် မက တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာကို သွားမြင်မိလို့ပဲ။ ဒီ ကျောက်ကို ဘာမှ မနှမျောပဲ ကျွန်တော့်ကို ပေးပစ်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ရင်ထဲကလာတဲ့ စေတနာကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ”သင့်လျော်အောင် ဘာသာပြန်ပါသည်။ဘာသာပြန်သူ - မိုးကုတ်သား
Birth Flowers; မွေးနေ့ ပန်းများ (ပန်းစကား ၃)
မွေးနေ့မွေးလတွေအတွက် သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပန်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် မွေးနေ့တွေဟာ သမိုင်းကိုယ်စီ ရှိကြသလို မွေးနေ့ပန်းတွေမှာလဲ လှပတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ တကယ်လို့များ မိတ်ဆွေတို့က တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ကို ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် လက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့အခါ စိတ်ကူးလို့ ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့ရှင်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပန်းလေးတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်ရအောင်။ JANUARY: CARNATION ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမြင့်ပြီး လေးစား ကြည်ညိုဖွယ် အဆင်းနဲ့ လှပခြင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကာနေးရှင်း ပန်းတွေဟာ လန်းဆတ်တဲ့ သူတို့အလှနဲ့ နှစ်ဦးကို ကြိုဆိုနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇန်နဝါရီလ မှာ မွေးဖွား သူများကို ကာနေးရှင်း ပန်းတွေက ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ FEBRUARY: IRIS မိုးပေါ်ထောင်မတ်နေတဲ့ IRIS ပန်းတွေရဲ့ နူးညံ့လှပတဲ့ ပွင့်လွှာသုံးချပ်က မျှော်လင့်ယုံကြည်မှု၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုနဲ့ ဥာဏ်ပညာ ကြီးမှု တို့ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ပွင့်ချပ်လေးတွေက လေထဲပျံတက်နေပြီး သွယ်လျတဲ့ ရိုးတံပင်စည်က ကောင်းကင်နဲ့ မြေပြင်ကို သွယ်ဆက် ပေးထားသလို ရှိတဲ့အတွက် ရှေးဟောင်း ဂရိလူမျိုးတွေက နတ်ဘုရားရဲ့ တမန်တော်ပန်း အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ MARCH: DAFFODILဆောင်းလရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး အချိန်ကာလများစွာ စောင့်စားနေရတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးရဲ့ အိမ်အပြန်ကို ကြိုဆိုနေသလို ငွားငွားစွင့်စွင့် ပွင့်ဖူးနေတဲ့ အဝါရောင် ဒက်ဖဒလ်ပန်းဟာ မတ်ခ်ျလ ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အသစ်တဖန် မွေးဖွားခြင်း၊ စတင်ခြင်းတွေ နဲ့ ဒက်ဖဒလ်ပန်းက အလေးထားမှု၊ နွေးထွေးမှု နဲ့ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးခြင်းတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။APRIL: DAISYမြစ်စောင့်နတ်သမီးတစ်ပါးက သူမရဲ့အလှကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေရဲ့ ဘေးရန်ကနေ ရှောင်ချင်တဲ့အတွက် မထင်ရှားပေမဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းကလေးအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒေစီပန်းကလေး အဖြစ်ပေါ့။ ခလေးဆန်တဲ့ အပြစ်ကင်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ နုနယ်ပြေပြစ်မှုနဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုတွေကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ပန်းကလေးပေါ့။ MAY: LILYLILY ပန်းကလေးတွေဟာ နတ်ဘုရားမ ဟီရာရဲ့ နို့ရည်ကနေ မွေးဖွားလာတယ်လို့ ရှေးခောတ် ဂရိလူမျိုးတွေက ယုံကြည်ကြတယ်။ စင်ကြယ်သော အကျင့်သီလ၊ နှိမ့်ချအောက်ကျို့ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခြင်းနဲ့ ချိုသာကြည်လင်မှု တို့ကို ညွှန်းဆိုတဲ့ ပန်းလေးပေါ့။ မေလဖွားတွေရဲ့LILY ပန်းကလေးက စိတ်နှလုံး ဖြူစင်ခြင်း၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်း နဲ့ အလေးအမြတ် ထားခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။JUNE: ROSEချစ်မြတ်နိုးမှုရဲ့သင်္ကေတ ဖြစ်တဲ့ နှင်းဆီပန်းမှာ အဓိပ္ပါယ် သမိုင်းကြောင်း များစွာ ရှိပါတယ်။ ဂရိ အချစ်နတ်ဘုရားမ အဖရိုဒိုက်က သူမရဲ့ ချစ်လှစွာသော သား အီရို့စ် အတွက် နုင်းဆီကို လက်ဆောင် ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်။ အလှဘုရင်မ ကလီယို ပန်ထွာ က မာ့ခ်အန်ထော်နီကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် နှင်းဆီ ပွင့်ချပ်တွေကို ဒူးဆစ် မြှုပ်တဲ့အထိ ခန်းလုံးပြည့်ခင်းပြီး ကြိုဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ အသွေးစုံတဲ့ နှင်းဆီတွေက အရောင်အလိုက် အဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိပေမဲ့ အားလုံးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုထားပါတယ်။ ဂျွန်လ ဖွားတွေရဲ့ နှင်းဆီဟာ အပြစ်အနာအဆာကင်းသော အလှ နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။JULY: DELPHINIUMလင်းပိုင် ပုံနဲ့ ဆင်တူပြီး စိမ်းညို့သန်စွမ်းလှသော DELPHINIUM ပန်းလေးတွေက ပွင့်လင်းဖော်ရွေတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရှိတဲ့ သံယောဇဉ်တို့ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အရောင်၊ အဆင်း၊ ရနံ့နဲ့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေတဲ့ ဒီ နွေရာသီ ပန်းကလေးတွေဟာ အမောပြေ လန်းဆန်းစေတဲ့၊ ပြတ်သား ထင်ရှားတဲ့ သဘာဝအလှတရားကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ AUGUST: GLADIOLAဩဂုတ်လဖွား တွေအတွက် GLADIOLA ပန်းကတော့ သန်မာကြံခိုင်မှု နဲ့ဖြောင့်မတ်မှု တို့ကို ကိုယ်စား ပြုပါတယ်။ လက်တင်ဘာသာ “gladius” ဆိုတဲ့ “ဓား” ကနေ ဆင်းသက်လာပြီး ရိုမန်သူရဲကောင်း တွေကို ညွှန်းဆိုပါတယ်။ အသဲနှလုံးကို ဖောက်ထွက်သွားမတတ် စူးရှတဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ GLADIOLA ပန်းဟာ ရူးသွပ်မတတ် စွဲလန်းစေတတ်တဲ့ Romantic သင်္ကေတလဲ ဖြစ်ပါတယ်။SEPTEMBER: ASTERပေါများ ကြွယ်ဝတဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ အရိုင်းဆန်ဆန်အလှ ရှိတဲ့ ASTER ပန်းလေးတွေကို ကြည့်မြင်လိုက်ရုင်္နဲ့ ဘာကြောင့် သူတို့က မှော်ဆန်ဆန် ပြုစားနိုင်ရတာလဲ ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ASTER ပန်းပင်က အရွက်တွေကို မီးရှို့လိုက်ရင် ထွက်တဲ့ ရနံ့က မကောင်းဆိုးဝါတွေ ပြေးစေတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရှေးတုန်းက ရှိဘူးပါတယ်။ဆောင်းဦး ရာသီပန်းဖြစ်တဲ့ ASTER ပန်းလေးတွေဟာ ချစ်ခြင်းကို ဆွဲဆောင် ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အလှတရားရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်ပါတယ်။OCTOBER: MARIGOLD MARIGOLD ပန်းလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လှပတဲ့ ဆောင်းရာသီ အဆင်အသွေး တွေနဲ့ အောက်တိုဘာ လဖွားတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အလွန်တောက်ပတဲ့ အရောင်အသွေးရှိပြီး သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်လို နွေးထွေး လှပတဲ့ MARIGOLD ပန်းလေးတွေဟာ ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်း၊ တင့်တယ်ခြင်း၊ ကျက်သရေရှိခြင်းတိုပရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်ပါတယ်။ NOVEMBER: CHRYSANTHEMUM ဂန္ဓမာပန်းလေးတွေဟာ နေမင်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ တစ်ချို့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ပုံပြင်တွေမှာ ရးသားကြတယ်။ လှပတောက်ထိန်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အရောင်အဝါတွေက စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့မှုရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်တယ်။ နိုဝင်ဘာလ ဖွားတွေရဲ့ မွေးလပန်းဖြစ်တဲ့ ဂန္ဓမာပန်းပွင့်ရဲ့ ပွင့်ချပ်လေး တစ်လွှာကို ဝိုင်ခွက်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ အသာလေး ထားပေးလိုက်ရင် ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး သက်တော် ရာကျော်ရှည်ဖို့ ချီးမြှောက် ဆုတောင်း လိုက်တာပါပဲ။ DECEMBER: POINSETTIA POINSETTIA တွေဟာ ခရစ်စမတ်ပန်း ဖြစ်သလို မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချသော ပေါင်းပင်တစ်မျိုး လဲဖြစ်တယ်။ တစ်ခါက မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ပန်းဥယာဉ်မှူးတွေ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းမံတွေ ကို မတတ်နိုင် တဲ့အတွက် ခြံထဲက ပေါင်းပင်တစ်မျိုကို ဘုရားကျောင်းမှာ သွားပြီး လှူလိုက်တဲ့အခါမှာ ပေါင်းပင်က အရွက်တွေဟာ လှပတဲ့ အနီရောင်ပန်းပီင့်တွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တယ် တဲ့။ မြူးထူးပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကောင်းချီးသြဘာပေးမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီဇင်ဘာလဖွားတွေရဲ့ POINSETTIA ပန်းဟာ အောင်မြင်မှု၊ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်မှု နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့ သင်္ကေတပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဒီ ဆယ့်နှစ်လရာသီ အတွက် ပန်းတွေကို လိုက်ပြီး စုရင်းနဲ့မှ ပန်း နာမည်တော်တော်များများကို မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဘော်ဘော်တွေ သိတယ်ဆိုရင်လဲ ကျွန်တော့် ကို လက်တို့ကြပါဦးဗျာ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် သိသလောက် နာမည်တွေပဲ ရေးထားတာ။ မှားနေတာရှိရင်လဲ ပြောပြ ကြပါဦးခင်ဗျာ။ CARNATION =ကာနေးရှင်းပန်းIRIS = အိုင်းရစ်ပန်းDAFFODIL = DAISY = ဒေစီပန်းLILY = လီလီROSE = နှင်းဆီပန်းDELPHINIUM =GLADIOLA = သစ္စာပန်းASTER =MARIGOLD = ကုလားပန်းCHRYSANTHEMUM = ဂန္ဓမာပန်းPOINSETTIA = ခရစ်စမတ်ပန်းပန်းနာမည်တွေကို ပြောပြပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ စုဆောင်းတင်ပြသူ - မိုးကုတ်သား
VITHUKAR Thet Kyiee Pu Zaw Pwae , 2008 (will updat...
WHAT IS A FAMILY? (မိသားစု ဆိုတာ)
Whaling in the Faroe Islands, Denmark (ဒိန်းမတ်နို...
စာတစ်အုပ်ကို သူ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ အကဲမဖြတ်ပါနဲ့
ပန်းစကား ၂ (နှင်းဆီ)
HKM+YMK Wedding Day (November 02; 2008; Sunday 7:0...
Knowledge is Free (ဗဟုသုတတွေကို အခမဲ့ မျှဝေပေးနေတဲ...
Presentation @ HKM+YMK Wedding